Ahoana ny fomba hanakanana saka kely amin'ny fivalananan | Noti saka
Ahoana ny fomba hampijanonana ny fivalanana amin'ny saka kely
Placeholder sary Laura Torres | | curiosities, aretina
Ny fivalanana dia famantarana iray izay, rehefa miseho ao amin'ny zanany izy, dia olana lehibe tokoa. Mila mihinana be ny kely mba hitombo, fa raha tsy levona tsara ilay sakafo ary voaroaka haingana koa dia tsy mahazo otrikaina ilaina ny vatana. Rehefa mitranga izany dia mijanona fotsiny ny fitomboana, fa koa tandindomin-doza ny ain'ny biby.
Noho io antony io dia tena ilaina ny mijery tsara ny volom-borona mba hahafahany mandray ny fepetra ilaina raha sendra marary izy. Mba hanamorana izany dia holazaiko aminao maninona no azo aseho an'io soritr'aretina io sy ny fomba fijanonan'ny fivalanana amin'ny saka kely.
1 Inona ny fivalanana?
1.1 Aretim-pivalanana VS fivalanana mahery vaika
1.2 Fanontaniana hodinihina raha voan'ny fivalanana ny sakao
2 Fa maninona ny saka-ko no mivalana?
2.1 Inona avy ireo soritr'aretina?
3 Voan'ny aretim-pivalanana ny saka ary tsy lasa izy, ahoana no hanajanonana ny fivalanana?
3.1 Inona no azoko atao ao an-trano raha mivalana ny zanakako?
3.2 Inona no azoko atao mba hampitomboana ny saka ny saka?
Inona ny fivalanana?
Amin'ny fomba ifotony, dia azo lazaina fa ny fivalanana dia fihenan'ny tsy fitovizan'ny fivorian'ny zanakao-saka, izay matetika miaraka amin'ny fiakaran'ny hafanan'ny fahalotoana.
Aretim-pivalanana VS fivalanana mahery vaika
Miresaka momba izany isika ny fivalanana rehefa manana ny saka fanovana ny tsy fitovian'ny seza miampy 7 ka hatramin'ny 10 andro mitohy na miverimberina. Raha, ny aretim-pivalanana, Izay ve matetika maharitra 3 andro eo.
Ity fahasamihafana ity dia hanampy ny mpitsabo bibyo hamantatra ny antony mety sy ny aretina ananan'ny saka. Raha ny saka saka tanora, fivalanana mahery vaika vokatry ny katsentsitra na aretina viral, toy ny ohatra panleukopenia. Na izany aza, ny fivalanana maharitra dia mahazatra kokoa amin'ny saka antitra noho ny inflammatoire, neoplastic (fivontosana) na ny fizotran'ny endocrine (hyperthyroidism dia mahazatra amin'ny saka).
Fanontaniana hodinihina raha voan'ny fivalanana ny sakao
Raha indray mandeha ny zanakao-saka dia tsy misy antony tokony hatahorana. Na izany aza, raha manomboka mivalana tsy an-kijanona mandritra ny andro izy ary manohy ny ampitso dia tokony handeha ho any amin'ny toeram-pitsaboana biby itokisanao ianao, mety ho olana lehibe izany.
Rehefa mankany amin'ny mpitsabo ianao dia hanontany anao ny andian-panontaniana (anamnesis) izay tsy maharary na oviana na oviana ny hahafantatra izany satria manampy anao betsaka hanazava tsara kokoa ny zava-mitranga amin'ny sakao sy ny mpitsabo dia manamaivana kokoa ny aretina. Noho io antony io dia apetrako ny karazana fanontaniana hapetrak'izy ireo aminao etsy ambany:
Impiry ianao no mivalana isan'andro?
Inona ny lokon'ny poops amin'izao fotoana izao?
Toa manaintaina ve ianao rehefa manidina?
Efa nahita rà tao anaty ala ve ianao?
Misy saka intsony ve ao an-trano?
Voadona ve ireo biby hafa ao an-trano?
Niakatra ve ny habetsaky ny seza?
Nahita azy nihazakazaka nankany amin'ny boaty fasika ve ianao, ary maika?
Mitsambikina ve ianao alohan'ny hahatongavanao amin'ny boaty fasika?
Nahita mucus tao amin'ny fipetranao ve ianao?
Toy ny pasty na ranoka ve ny poof?
Very lanja ve ny sakao?
Efa nandoa ve ny sakao hatramin'ny nanombohan'ny fivalanana?
Hafiriana ianao no voan'ny fivalanana ary oviana ianao no nanomboka nahazo azy ireo?
Inona no nohaninao amin'izao fotoana izao?
Efa nanova ny sakafonao ve ianao tato ho ato?
Voajanahary ve ianao ary oviana no fotoana farany?
Ity baterian'ny fanontaniana ity dia ampiasaina hanasokajiana ny niavian'ny fivalanana sy hahafahana mamantatra ny antony. Manomboka eto dia ho fantatry ny mpitsabo biby bebe kokoa ny toe-piainana mety misy ny saka ka afaka manomboka manao fitsapana mifanaraka aminy izy.
Fa maninona ny saka-ko no mivalana?
Ny aretim-pivalanana amin'ny saka tanora dia miseho noho ny antony maro: katsentsitra ny tsinay, fiovana tampoka amin'ny sakafo, aretina, colitis na allergy sakafo. Ny mahazatra indrindra dia ny roa voalohany, fa na ahoana na ahoana dia tsy maintsy mandeha avy hatrany any amin'ny dokotera ianao mba tsy hiharatsy ny saka.
Inona avy ireo soritr'aretina?
Ho fantatsika fa manana olana ny saka rehefa manala tena matetika. ny malalaka ny seza, mihosoka (misy rano be) ary afaka mitondra ra izy ireo. Ary koa, noho ny fahaverezan'ny tsiranoka mety ho tsy ampy rano ianao ary hihena.
Fambara iray hafa izay hiseho dia tsy miraharaha. Ny saka iray marary dia mety tsy hahatsapa hoe manao zavatra, zavatra tokony hampandrenesina antsika. Na dia tsy mampiseho tsy fankasitrahana foana aza ireo saka, araka ny nolazaiko teo am-piandohan'ny lahatsoratra, dia tompon'andraikitra amin'ny aretina misaron-tava izy ireo.
Voan'ny aretim-pivalanana ny saka ary tsy lasa izy, ahoana no hanajanonana ny fivalanana?
Na izany aza, ny zavatra voalohany tokony hataontsika dia ento any amin'ny veterinera izy. Amin'ny maha-saka tanora anao dia mbola malemy ny hery fiarovan'ny vatana ary mahatonga azy io ho mora tohina kokoa. Tsy mila manome fanafody mihitsy isika raha tsy noho ny torohevitry ny matihanina satria mety hampitombo ny toe-javatra. Ao amin'ny tobim-pitsaboana dia holazain'izy ireo aminay ny fomba hitsaboana azy mba hihatsara.
Avelako ho anao ny sokajin-javatra iray izay tsy ahafahanao miandry ny mankany amin'ny tobin'ny veterinera raha mivalana ny saka:
Raha latsaky ny herintaona ny saka anao dia manomboka amin'ny fivalanana mahery vaika.
Raha tsy dia mihetsika be ny sakao dia tsy te hihinana izy ary toa tsy ampy rano.
Raha mahatsikaritra ny fivalananan-drà miaraka amin'ny ra sy / na moka.
Raha manana seza ranon-javatra 2-3 ianao mandritra ny andro.
Raha ny sakao dia nifandray tamin'ny saka hafa miaraka amin'ny panleukopenia.
Inona no azoko atao ao an-trano raha mivalana ny zanakako?
Na ahoana na ahoana, ny fitsaboana veterinera ihany no tsy ho ampy. Ao an-trano tsy maintsy mahazo antoka isika fa misotro rano izy ary mihinana sakafo saka-kalitao avo lenta. Raha manome azy ireo kapoaka ianao ary misotro rano kely kokoa noho ny amin'ny sakafony mahazatra, dia aza manahy be loatra fa ara-dalàna izany satria miaraka amin'ny sakafo mando dia mahazo rano anjara biriky izy.
dia Handao anao ireo tolo-kevitra hanaraka anao izahay rehefa voan'ny fivalanana ny saka:
Manaova a Haingam-pandeha 12 ora.
Rehefa afaka 12 ora izahay dia manomboka amin'ny fanomezana sakafo matsiro azo tsaboina manokana ho an'ny olan'ny fandevonan-kanina. Eny an-tsena dia misy sakafo vitsivitsy amin'ny veterinary, avelako ho anao ny rohy mankany amin'ny sakafo maromaro izay mandeha tsara:
Hill's Feline I / D sakafo lena
Royal Canin mando gastrointestinal ho an'ny saka
Sakafo saka mando gastroenterika Purina EN
Ireo sakafo ireo Afaka mahita azy ireo any amin'ny magazay manokana sy tobim-pahasalamana ianao.
Homena anao aloha izahay sakafo mando amin'ny vola kely ary matetika be. Mba hanomezana hevitra anao, manodidina ny 2 sotro fihinanana isaky ny 2-3 ora.
Aorian'ny 12-24 ora miaraka amin'ireo torolàlana momba ny sakafo ireo nanohy nanolotra sakafo matanjaka izahay. Ity dia tsy maintsy manokana ho an'ny olana amin'ny gastrointestinal. Ireo marika nomeko anao etsy ambony dia manana feed manokana momba ny olana amin'ny gastrointestinal. Hafangarontsika vitsivitsy amin'ireo karazan-tsakafo kely miaraka amin'ny kapoaka.
Mandritra ny 24 ora manaraka dia hanome anao sakafo bebe kokoa izahay noho ny sakafo lena, mandra-pisakafoako fotsiny dia mieritreritra aho.
Rehefa afaka andro vitsivitsy izay tsy nahitana fivalanana na poofy malefaka kokoa dia afaka miverina amin'ny sakafony mahazatra ihany isika. Ny fampidirana miverina amin'ny sakafony mahazatra dia tokony hatao tsikelikely mandritra ny 4-5 andro, mampifangaro ny sakafom-panafody amin'ny alikaola amin'ny sakafo mahazatra azy.
Inoan'ny besinimaro fa tsara ny manome ron-kena na mofo mofomamy nandrahoina. Fa ny tena zava-misy dia miaraka amin'ny sakafo manokana ho an'ny olan'ny gastrointestinal dia tsy hanana tsy fahampian-tsakafo ny sakafonao, ary ambonin'izany rehetra izany dia hanana fahasitranana haingana raha oharina amin'ny "fanafody an-trano".
Ny vidin'ny kapoaka amin'ireo marika telo ireo dia eo anelanelan'ny € 1,89 sy € 3,5, miankina amin'ny haben'ny kapoaka ihany koa. Ary matetika ny feed dia manodidina ny € 20-25.
Raha ara-dalàna, ny Hill sy ny Royal Canin ary ny Purina amin'ireo vokatra ireo dia misy prebiotika, ambany tavy sy proteinina hahalefaka azy ireo.
Tiako manokana ny vokatr'i Hill satria misy izany fahafinaretana avo dia avo. Midika izany fa mahita ny tsirony sy mamofona mahafinaritra be ilay saka, avy eo tsy mila mampiasa "fikafika" vao hihinana ianao. Manana sakafo mando isan-karazany ihany koa izy ireo toy ny pâté ary iray hafa amin'ny laoka, ny farany indrindra, tian'izy ireo izany!
Ity ny rohy raha te hahalala bebe kokoa momba ireo vokatra ireo ianao: tsindrio eto.
Toe-javatra iray hafa tokony hodinihina ihany koa ny saka mety tsy te hihinana mandritra ny andro vitsivitsy. Noho izany dia tsy maintsy manome ianao "Sakafo an-tery". Mba hanaovana izany dia tsy maintsy afangaronao amin'ny rano kely ny atin'ny sakafom-biby. Tokony hazava tsara izy io mba hahafahany mandray azy miaraka amin'ny avaratra. Manoro hevitra anao aho mba hisafidy syringe tsy mila mila 10ml, ary fehezinao ny vola laninao. Tandremo manokana mba hanome fotoana azy hitelina, mba tsy ho voakenda isika.
Tsara ihany koa io manome probiotika como el FORTIFLORA® ho an'ny saka (eto dia azonao atao ny mividy azy). Azo antoka fa hanome azy ireo ny dokoteranao.
Inona no azoko atao mba hampitomboana ny saka ny saka?
Fetsy tsara hampitomboana ny saka ny saka dia ny fanomezana hafanana kely amin'ny microwave amin'ny sakafo lena, izany dia mahatonga ny fofona ho mahery kokoa, ankoatry ny mahafinaritra kokoa ny mihinana azy rehefa mafana.
ihany koa tsy maintsy hanome fitiavana be azy isika mba hanananao tanjaka. Ary ambonin'izany rehetra dia mahareta, aza mibedy azy raha mibontsina ivelan'ny boaty fasika izy, tadidio fa ratsy izy, tsy hoe fikomiana izany.. Manantena aho fa nanampy anao ity lahatsoratra ity ary tadidio fa ny mpitsabo dia ny tena afaka manampy ny sakao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Saka saka » saka » aretina » Ahoana ny fomba hampijanonana ny fivalanana amin'ny saka kely
Inona no saka saka?
Orona maina ny saka ko, ara-dalàna ve izany?